Ingabe Ukuvunyelwa Kosaziwayo Kuyindlela Yokumaketha Esebenzayo? | Martech Zone
Ingabe Ukuvunyelwa Kosaziwayo Kuyindlela Yokumaketha Esebenzayo?
ULwesithathu, May 6, 2015 Douglas Karr
I-Celebrity Endorsement ibilokhu ibonwa njengenketho esebenzayo yezinkampani zokukhangisa ngemikhiqizo yazo. Izinkampani eziningi zikholelwa ukuthi ukuba nemikhiqizo yazo kuhlotshaniswa nosaziwayo odumile kuzosiza ukushayela ukuthengisa. Abathengi babonakala bengaqiniseki ngethonya labo ngo-51% abathi ukuvunywa kosaziwayo kwenza umehluko omkhulu ezinqumweni zabo zokuthenga.
Ngenkathi i-ROI kumasu amaningi wokumaketha ikala I-ROI kwezincomo zosaziwayo kungaba nzima kakhulu ukulinganisa. Kunezinzuzo eziningi ezingaba khona ezihambisana nokunconywa kosaziwayo kepha kunezingibe eziningi ezingaba khona ezidinga ukubhekwa ngokucophelela.
Lezi zingibe zidalwa uma uthembele kusaziwayo oyedwa ukukhangisa umkhiqizo wakho. Isithunzi senkampani yakho kungenzeka sisezandleni zomuntu oyedwa isithombe sakhe esingashintsha ubusuku obubodwa ngenxa yehlazo losaziwayo. Ingabe kufanelekile ngempela ukusebenzisa le ngozi?
Njengomphumela walokhu, impumelelo yezincomo zosaziwayo yehluka kakhulu futhi empeleni kuyindaba yabathile abasebenzayo kanti abanye akunjalo. Ukubaluleka kokukhetha usaziwayo ofanele kubaluleke kakhulu ekunciphiseni ubungozi bokwaziswa okungekuhle enkampanini yakho. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izingozi ezihambisana nokugunyazwa kosaziwayo azisoze zachithwa ngokuphelele, futhi ukusabela kumthelela omubi wokugunyazwa kosaziwayo kuzodinga ukuthi kubhekwane nakho ngokucophelela.
Lokhu infographic kusuka Sayina iRama Toronto ikunikeza ngezibalo zokuthi ukugunyazwa kosaziwayo kunethonya kangakanani, kanye nezindaba ezingemuva kokuvunywa kosaziwayo okuphumelele nokungaphumeleli kuyo yonke le minyaka.
Tags: beyoncebritney imikhontoCatherine zeta jonesosaziwayo abagunyazayo infographicudumo lomvuzo wokudumisaingozi yodumo losaziwayoizincomo zosaziwayoUDavid BeckhamDonald icilongoEllen degeneresama-kardashiansUNicole KidmanNielsenoj simpsonrihannasignaramaisignoramatoronto
Ungalusebenzisa Kanjani Icebo Lokumaketha Eliphumelelayo